ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၂) – သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား (၄)ပါး၊ အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်း (၂) – ဝင်းမေတ္တာ
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၂) – သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား (၄)ပါး၊ အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်း (၂)
February 20, 2022 February 27, 2022 / ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ သင်တန်း
(က) သောတာပတ္တိယင်္ဂ= သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား (၄)ပါး
(ခ) အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်ပုံ (၂)
ဆရာတော် ဦးကုမာရာဘိဝံသသည် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ မည်သို့မည်ပုံ ရောက်အောင် လက်တွေ့ကျင့်ကြံ အားထုတ်ခြင်းများကို တဆင့်ပြီးတဆင့် ဟောပြောဆွေးနွေးပို့ချပေးသည်။
သိကြားမင်း၏ အမေး (သက္ကပဉ္စာ) များDownload
ပုဂ္ဂိုလ် (၄)မျိုး – ဥဂ္ဃဋိတညူသုတ်
၁၀၅၁။ “စတ္တာရောမေ, ဘိက္ခဝေ, ဓမ္မာ ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ သောတာပတ္တိဖလသစ္ဆိကိရိယာယ သံဝတ္တန္တိ။ ကတမေ စတ္တာရော? သပ္ပုရိသသံသေဝေါ, သဒ္ဓမ္မဿဝနံ, ယောနိသောမနသိကာရော, ဓမ္မာနုဓမ္မပ္ပဋိပတ္တိ – ဣမေ ခေါ, ဘိက္ခဝေ, စတ္တာရော ဓမ္မာ ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ သောတာပတ္တိဖလသစ္ဆိကိရိယာယ သံဝတ္တန္တီ”တိ။ ပဉ္စမံ။
[ပဂေ-၃၆၀] (၅။ သောတာပတ္တိဖလသုတ္တံ၊ မဟာဝဂ္ဂသံယုတ္တပါဠိ၊ သံယုတ္တနိကာယော)
၁၆၅။ အထ ခေါ ဘဂဝါ ယေန ဥပဋ္ဌာနသာလာ တေနုပသင်္ကမိ, ဥပသင်္ကမိတွာ ပညတ္တေ အာသနေ နိသီဒိ။ နိသဇ္ဇ ခေါ ဘဂဝါ ဘိက္ခူ အာမန္တေသိ – “အယမ္ပိ ခေါ, ဘိက္ခဝေ, အာနာပါနဿတိသမာဓိ ဘာဝိတော ဗဟုလီကတော သန္တော စေဝ ပဏီတော စ အသေစနကော စ သုခေါ စ ဝိဟာရော ဥပ္ပန္နုပ္ပန္နေ စ ပါပကေ အကုသလေ ဓမ္မေ ဌာနသော အန္တရဓာပေတိ ဝူပသမေတိ။ သေယျထာပိ, ဘိက္ခဝေ, ဂိမှာနံ ပစ္ဆိမေ မာသေ ဥဟတံ [ဦဟတံ (က။)] ရဇောဇလ္လံ
[ပဂေ-၈၉] (၃။ တတိယပါရာဇိကံ၊ ပါရာဇိကပါဠိ၊ ဝိနယပိဋကေ)
၁၀၇။ ကထဉ္စ, ဘိက္ခဝေ, ဘိက္ခု ကာယေ ကာယာနုပဿီ ဝိဟရတိ? ဣဓ, ဘိက္ခဝေ, ဘိက္ခု အရညဂတော ဝါ ရုက္ခမူလဂတော ဝါ သုညာဂါရဂတော ဝါ နိသီဒတိ, ပလ္လင်္ကံ အာဘုဇိတွာ, ဥဇုံ ကာယံ ပဏိဓာယ, ပရိမုခံ သတိံ ဥပဋ္ဌပေတွာ။ သော သတောဝ အဿသတိ, သတောဝ [သတော (သီ။ သျာ။)] ပဿသတိ။ ဒီဃံ ဝါ အဿသန္တော ‘ဒီဃံ အဿသာမီ’တိ ပဇာနာတိ, ဒီဃံ ဝါ ပဿသန္တော ‘ဒီဃံ ပဿသာမီ’တိ ပဇာနာတိ, ရဿံ ဝါ အဿသန္တော ‘ရဿံ အဿသာမီ’တိ ပဇာနာတိ, ရဿံ ဝါ ပဿသန္တော ‘ရဿံ ပဿသာမီ’တိ ပဇာနာတိ, ‘သဗ္ဗကာယပဋိသံဝေဒီ အဿသိဿာမီ’တိ သိက္ခတိ, ‘သဗ္ဗကာယပဋိသံဝေဒီ ပဿသိဿာမီ’တိ သိက္ခတိ, ‘ပဿမ္ဘယံ ကာယသင်္ခါရံ အဿသိဿာမီ’တိ သိက္ခတိ, ‘ပဿမ္ဘယံ ကာယသင်္ခါရံ ပဿသိဿာမီ’တိ သိက္ခတိ။
[ပဂေ-၇၀] (၁၀။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တံ၊ မူလပဏ္ဏာသပါဠိ၊ မဇ္ဈိမနိကာယော)
နိမိတ်အမျိုးမျိုး – နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဥ် အကျဥ်းချုပ် (၁) (စာမျက်နှာ ၉၈-၉၉)Download
နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဥ် အကျဥ်းချုပ် အတွဲ (၁) သမထကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (က)
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ February 13, 2022
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၁) – သိကြားမင်း၏ အမေး (သက္ကပဉ္စာ) များ၊ အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်း (၁) February 13, 2022
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၂) – သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား (၄)ပါး၊ အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်း (၂) February 20, 2022
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၃) – လူ့လောကပျက်စီးခြင်း​၏ အကြောင်းသုံးပါး၊ အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်း (၃) February 27, 2022
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၄) – အာနာပါန မှ ဝိပဿနာသို့ (၁) March 6, 2022
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၅) – အာနာပါန မှ ဝိပဿနာသို့ (၂) – ဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း March 13, 2022
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၆) – အာနာပါန မှ ဝိပဿနာသို့ (၃) – ရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပွါးနည်း March 20, 2022
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၇) – အာနာပါန မှ ဝိပဿနာသို့ (၄) – ရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း March 27, 2022
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၈) – အာနာပါန မှ ဝိပဿနာသို့ (၅) – ရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း April 9, 2022
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၉) – အာနာပါန မှ ဝိပဿနာသို့ (၆) – ရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း April 10, 2022
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၁၀) – အာနာပါန မှ ဝိပဿနာသို့ (၇) – နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (က) April 17, 2022
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၁၁) – အာနာပါန မှ ဝိပဿနာသို့ (၈) – နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (ခ)￼￼ April 28, 2022
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ (၁၂) – အာနာပါန မှ ဝိပဿနာသို့ (၉) – နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (ဂ) May 1, 2022